ပရိုမိုးရှင်း – Shan99.asia
100% Daily Bonus Promotion 2021
100% Daily Bonus 2021
( နေ့စဥ်အပိုဆု ၁၀၀% )
အပ်ငွေ ၅၀၀၀ကျပ် အပိုဆုဘောနပ် ၅၀၀၀ကျပ်ရရှိ လည်ပတ်မှုကြိမ်ရေ ၁၅ ( ကြိမ် )။
မှတ်ချက်။ ။ ဤဆုကြေးကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာတောင်းခံနိုင်သည်။
လည်ပတ်မှု ကြိမ်ရေ နှင့် ငွေပေးချေမှုတွက်ချက်။
အမြတ်တွက်ချက်ရန် - အပ်ငွေပမာဏ + ရရှိသောအပိုဆုကြေး ( လည်ပတ်မှုကြိမ်ရေ = ၁၅ ကြိမ် )
အပ်ငွေ - ၅,၀၀၀
ဘောနပ် - ၅,၀၀၀
စုစုပေါင်း - ၁၀,၀၀၀
စုစုပေါင်း လည်ပတ်မှုကြေး - ၁၅၀,၀၀၀
ဂိမ်းများ - ငါးဂိမ်း, စလော့ဂိမ်း
ထုတ်ယူ - ၅၀,၀၀၀
- ဤပရိုမိုးရှင်းသည် Shan99 အွန်လိုင်း ကာစီနို တွင်စာရင်းသွင်းပြီးသောအသင်းဝင်များအနေဖြင့် ဤပရိုမိုးရှင်းတွင်အပိုဆုကြေးရရှိရန် အရည်အချင်းပြည့်မှီရန် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ငွေသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
- ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်သည်အသင်းဝင်များအပိုဆုကြေးရရန်အတွက်ငွေကျပ် ၅၀၀၀ ကိုငွေသွင်းရမည်။
-ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အသင်းဝင်များသည် စလော့ဂိမ်းများလောင်းခြင်းကိုသာခွင့်ပြုသည်။ Shan99 Online Casino တွင်အခြားငါးပစ်ဂိမ်း, ရှမ်းကိုးမီး, ဖဲဂိမ်းများကိုလောင်းကစားခြင်းကိစ္စရပ်တွင်ဆုတ်ခွာမည်မဟုတ်ပါ။
-အမြတ်အစွန်းကို slot များ၊ ဂိမ်းများနှင့်လောင်းကစားရုံများမှသာရေတွက်မည်။ အပိုဆုကြေးများ၊ အနီရောင် packets များ (အနီရောင်စာအိတ်များ) သို့မဟုတ်လောင်းကြေးပမာဏများအားလုံးအကျိုးအမြတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
-အကယ်၍ အနီရောင် packets များကို (အနီရောင်စာအိတ်များ) လက်ခံရရှိလျှင်မည်သည့်အမြတ်မှမလိုဘဲအသင်းဝင်များသည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
-ငွေထုတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Jackpot ဆုချီးမြှင့်ခံရပြီးအမြတ်အစွန်းမရသေးလျှင်အသင်းဝင်သည်လိုအပ်သောအမြတ်ကိုရရှိရမည်။
-ဤပရိုမိုးရှင်းသည် Shan99 အွန်လိုင်းကာစီနိုဒေတာဘေ့စ်မှအကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများ, ထူးခြားသောသတင်းအချက်အလက်ရှိသောအသင်းဝင်များအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ဆုကြေးငွေအားလုံးချက်ချင်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
-အသင်း ၀ င်များသည်လည်ပတ်ငွေကြေးအခြေအနေများနှင့်မသက်ဆိုင်လိုပါကပရိုမိုးရှင်းမရရှိပါကရွေးချယ်နိုင်သည်။
-အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကိုလက်ခံရရှိပါကအသင်း ၀ င်သည်ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သောလိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုဖြစ်လျှင် Shan99 Online Casino သည်ပရိုမိုးရှင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးငွေလက်ကျန်ကိုချက်ချင်းအေးစက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
-Shan99 Online Casino သည်ပရိုမိုးရှင်းကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
-Shan99 အွန်လိုင်းကာစီနိုအရောင်းမြှင့်တင်မှုများအားလုံးသည်လူတစ် ဦး၊ နာမည် - လိပ်စာ၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ဘဏ်အကောင့်၊ IP လိပ်စာတစ်ခုသာကန့်သတ်ထားသည်။
-အကယ်၍ အသင်းဝင်များသည်ပရိုမိုးရှင်းများကိုလက်ခံခြင်းမရှိဘဲငွေသွင်းခြင်း (သို့) ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပရိုမိုးရှင်းများကိုလက်ခံခြင်းမပြုဘဲအလောင်းအစားပြုလုပ်ပါကအသင်းဝင်များသည်ငွေထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ငွေသွင်းငွေပမာဏကို ကြိမ်ရေ ၁ (ကြိမ်)လည်ရမည်။
-စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသည် ၂၁/၄/၂၀၂၁ မှ စတင်၍ ထိရောက်မှုရှိသည်။
"* ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို 2015-08-01 00:00:01 (GMT + 7) မှနောက်ထပ်ကြိုတင်အသိပေးသည်အထိစတင်သည်။
* ဤပရိုမိုးရှင်းသည် Shan99.asia အသင်းဝင်အသစ်များအားလုံးအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
* မြှင့်တင်ရေးကိုသာပထမ ဦးဆုံးအကြိမ်ဆိုနိုင်သည်။
* ပရိုမိုးရှင်းအတွက်အနည်းဆုံးမြန်မာငွေ ၁၀၀၀၀ကျပ်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည် ။
"* ဤအပိုဆုကြေးသည်မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅၀,၀၀၀ အထိအများဆုံးဖြစ်သည်
"1) ငွေထုတ်ယူခြင်းမပြုမီသင် LIVE ကာစီနိုကစားနေစဉ်သိုက်နှင့်အပိုဆုကြေးပမာဏကို ၁၅ ကြိမ်ကျော်ရှင်းရမည်ဖြစ်သည်
2) ငွေထုတ်ယူခြင်းမပြုမီသင် slot GAMES ကစားစဉ် ၈ ကြိမ်နှင့်အထက်အပ်နှံငွေနှင့်ဘောနပ်စ်ပမာဏကိုလှိမ့်ရန်လိုအပ်သည်
"3) ငွေထုတ်ယူခြင်းမပြုမီသင်က ၉၁၈ Kiss ကစားစဥ်ခိုက်နှင့်အပိုဆုပမာဏသည် x3 အနိုင်ရငွေပမာဏဖြစ်ရမည်။
"- နှစ် ဦး စလုံးဆော့ဂိမ်းများ & LIVE GAMES နှစ် ဦး စလုံးကစားအကြိမ်ပေါင်း 30 ကျော်ကစားဖို့ရရှိသည်
"Baccarat ဖဲဂိမ်း ဘောနပ်မရှိ"
ပထမ ဦး ဆုံးအပ်ငွေ "၁၀၀၀၀ ကျပ် (918Kiss အတွက်တွက်ချက်မှု)
အပိုဆု "၁၀၀၀၀ ကျပ်ကို X ကို 100% = ၂၀၀၀၀ ကျပ်
" "(၁၀၀၀၀ကျပ် +၁၀၀၀၀ကျပ်) X ကို ၅ =၁၀၀,၀၀၀ကျပ် ငွေပမာဏအထိ"
(ငွေသွင်းခြင်း + အပိုဆုကြေး) ကို ၅ ဆအထိငွေထုတ်ယူနိုင်သည်။
စည်းကမ်းချက်များ & အခြေအနေ
* အပိုဆုကြေး၊ အပိုဆုကြေးနှင့်ငွေထုတ်ယူမှုသည်ဤပရိုမိုးရှင်းအတွင်းတွင်မရေတွက်ပါ။
* အတည်ပြုပြီးသောအလောင်းအစားများ / လောင်းကြေးများအားလုံးကိုသာကျော်လွှားရန်လိုအပ်ချက်ကိုရေတွက်သည်။ ဖျက်ထားသော (သို့မဟုတ်) ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားများ (သို့မဟုတ်) အလောင်းအစားများအားလုံး၊ ဂိမ်းတစ်ခုတည်း၌ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်တွင်ထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးသည်ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုမတွက်နိုင်ပါ။
* Shan99.asia သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်ကစားသမားအားလုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေစုစုပေါင်းအသင်း ၀ င်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ် ဦး တည်းသောအကြွင်းမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေဤပရိုမိုးရှင်းကိုအချိန်မရွေးပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
* တစ် ဦး ချင်း၊ မိသားစု၊ အိမ်ထောင်စုလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့် IP လိပ်စာများအတွက် Shan99.asia မှကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးကို (၁) ခုသာကန့်သတ်ထားသည်။
အနည်းဆုံးငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ သည်ချက်ချင်းအပိုဆုကြေး 5% ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
- မှတ်ချက်။ ။ အကန့်အသတ်မရှိသောအပိုဆုကြေးနှင့်အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်
918 အမြတ်အစွန်းကိုတွက်ချက်ရန်အမြတ်။ အပ်ငွေပမာဏ + ရရှိသောအပိုဆု x (slot game = 1) = ရုတ်သိမ်းမည့်အမြတ် (စုစုပေါင်းအရင်းအနှီး)
- Joker123 ၏အရောင်းအ ၀ ယ်တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန် - အပ်ငွေပမာဏ + ရရှိသောအပိုဆုကြေး x (1) = မထွက်ခွာမီပြုလုပ်ရမည့်လည်ပတ်ငွေပမာဏ
ဤပရိုမိုးရှင်းသည်ဤမြှင့်တင်ရေးတွင်အပိုဆုကြေးရရန်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် Shan99.asia အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတွင်အပ်နှံသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒီမြှင့်တင်ရေး, အဖွဲ့ဝင်များကနိမ့်ဆုံးအပ်နှံရမည်ဖြစ်သည်။ အပိုဆုကြေးရရှိရန်ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ ကျပ်
အသင်း ၀ င်များသည်စနစ်မှတဆင့်အပိုဆုတစ်ခုတောင်းခံနိုင်သည်။
- ဤပရိုမိုးရှင်းကိုလက်ခံရရှိသောအသင်းဝင်များသည် Joker123 ကို 918Kiss တွင်သာအလောင်းအစားပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။ Shan99.asia Online Casino တွင်အခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကစားလျှင်၎င်းတို့အားမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
အလောင်းအစားသည်အမြတ်နှစ်ဆနှင့်ဂိမ်းများနှင့်လောင်းကစားရုံများတွင်အလောင်းအစားများကိုမထုတ်ယူနိုင်မီအမြတ် ၁% အမြတ်ရလိမ့်မည် (အရင်းအနှီးမပါ) ။
- အမြတ်အစွန်းကိုလောင်းကစားဂိမ်းများနှင့်လောင်းကစားရုံများမှသာရေတွက်နိုင်သည်။ အခြားအပိုဆုများ အနီရောင် packet ကို (အနီရောင်စာအိတ်) သို့မဟုတ်အလောင်းအစားပမာဏကိုအားလုံးကိစ္စများတွင်အမြတ်အစွန်းအတွက်စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
အနီရောင်စာအိတ် (အနီရောင်စာအိတ်) ကိုရရှိပါကအသင်းဝင်များသည်မည်သည့်အမြတ်မှမရရှိဘဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
jackpot ဆု၏ဖြစ်ရပ်၌ သို့သော်အကျိုးအမြတ်မရရှိသော်လည်းအဖွဲ့ဝင်များသည်လိုချင်သောအမြတ်ကိုရရှိရမည် ရန်ပုံငွေများကိုထုတ်ယူနိုင်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်
ဤပရိုမိုးရှင်းကိုအခြားပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များနှင့် ပေါင်း၍ မရပါ
-Shan99.asia Online Casino ဒေတာဘေ့စ်မှအချက်အလက်များရှိသည့်အသင်းဝင်များသည်၎င်းတို့တွင်အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများရှိမှသာဤမြှင့်တင်ရေးသည်။ ဆုသို့မဟုတ်ဆုကြေးငွေအားလုံးချက်ချင်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
- အသင်း ၀ င်များသည်အလှည့်ကျအခြေအနေများအောက်တွင်မရှိလိုပါကပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုမရယူလိုပါ။
မြှင့်တင်ရေးကိုလက်ခံရရှိပါကအသင်းဝင်များသည်ငွေပေးချေမှုကိုသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများအရသို့မဟုတ်အကြွေးမသုံးမချင်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်း၊ ငွေသွင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်လျှင် Shan99.asia Online Casino သည်ပရိုမိုးရှင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးငွေလက်ကျန်ကိုချက်ချင်းသိမ်းယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
- Shan99.asia Online Casino သည်ကြော်ငြာများကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Shan99.asia Online Casino ၏ပရိုမိုးရှင်းအားလုံးကို ၁ ယောက်သာကန့်သတ်ထားသည်။ အမည် - နာမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဘဏ်အကောင့်၊ IP လိပ်စာပဲ။
- အသင်း ၀ င်တစ် ဦး သည်ငွေသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ငွေလွှဲခြင်းပြုလုပ်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်းမရှိဘဲအလောင်းအစားပြုလုပ်ပါကအသင်း ၀ င်သည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အတွက်ငွေသွင်းငွေပမာဏကို ၁ ကြိမ်ရှိရမည်။
- Shan99.asia အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အပြီးသတ်ဖြစ်သည်။
- စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသည် ၈/၈/၂၀၁၉ မှ စ၍ ထိရောက်မှုရှိသည်။
"* အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကို 2015-08-01 00:00:01 (GMT + 7) မှနောက်ထပ်ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားသည်။
"* ဤပရိုမိုးရှင်းသည် MTS555 အသင်းဝင်များအားလုံးအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
* တနင်္လာနေ့တိုင်းနောက်ဆုံး ၁၈း၀၀း၀၀ နာရီ (GMT + ၈) CASH REBATE သည် ၇ ရက်စီလည်ပတ်မှုတွက်ချက်ပြီးနောက် (အပတ်စဉ်) Shan99.asia အသင်း ၀ င်အကောင့်သို့စာရင်း ၀ င်ပါမည်။
"* ၃။ အနည်းဆုံးငွေပေးချေခြင်း CASH REBATE အတွက်တောင်းဆိုချက်များသည်အနည်းဆုံး ၃၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီးအများဆုံးငွေပေးချေမှုမရှိပါ။
"* ၄။ ကာစီနို Live CASH REBATE သည်အသင်းဝင်လောင်းကြေးပမာဏနှင့်လောင်းကစားပမာဏအပေါ်အခြေခံပြီးလောင်းကစားအကြိုကာလအတွင်းကစားရလိမ့်မည်။ Live Casino Hold'em, Blackjack, RNG နှင့် Slot Games တို့သည်ဤပရိုမိုးရှင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
* ဤပရိုမိုးရှင်းအတွက် 918Kiss သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
* ဤပရိုမိုးရှင်းကိုလက်ရှိကြိုဆိုသည့်အပိုဆုကြေးအားလုံးနှင့် ပေါင်း၍ မရပါ။
"* မဲချခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးမှလောင်းသောအလောင်းအစားများအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားပမာဏ / စုစုပေါင်းလောင်းကြေးကိုတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
"* MTS555 သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကစားသမားအားလုံးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ် ဦး ချင်းသော်လည်းကောင်းဤပရိုမိုးရှင်းကိုဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
0.4% Slot rebate
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကို 2015-08-01 00:00:01 (GMT + 7) မှနောက်ထပ်ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားသည်။
* ဤပရိုမိုးရှင်းသည် Shan99.asia အသင်းဝင်များအားလုံးအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
၂) တနင်္လာနေ့ကိုနောက်ဆုံး ၁၂း၀၀ နာရီ (GMT + ၇) အနေဖြင့် ၇ ရက်ကြာလည်ပတ်မှုတွက်ချက်ပြီးနောက် Shan99.asia အသင်းဝင်စာရင်းသို့ CASHREBATE ကိုထည့်သွင်းပါမည်။
၃။ CASHREBATE အတွက်ငွေပေးချေမှုမှာအနည်းဆုံး ၃၅၀၀ ကျပ်နှင့်အများဆုံးငွေပေးချေခြင်းမခံရပါ။
(၄) တွက်ချက်မှုသည် Shan99.asia Slot များနှင့် RNG ဂိမ်းများအတွက်သာအသုံးပြုသည်။ (အခြားထုတ်ကုန်များ၊ ဂိမ်းများကိုဤပရိုမိုးရှင်းအတွက်ချန်လှပ်ထားပါသည်) RNG Games နှင့် slot ဂိမ်းများကို rollover လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါမည်။
၅) ဤပရိုမိုးရှင်းအတွက် 918Kiss သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
(၇) မဲချခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးမှလောင်းသောအလောင်းအစားများအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားပမာဏ / စုစုပေါင်းလောင်းကြေးကိုတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
၈) Shan99.asia သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကစားသမားအားလုံးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ် ဦး ချင်းသော်လည်းကောင်းဤပရိုမိုးရှင်းကိုဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၉) Shan99.asiaမှကမ်းလှမ်းမှုများအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်း၊ မိသားစု၊ အိမ်ထောင်စုလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့် IP လိပ်စာတစ်ခုလျှင် (၁) ခုသာကန့်သတ်ထားသည်။
၁၀။ ငွေထုတ်ရန်အတွက်ငွေသွင်းသူများသည်အနည်းဆုံး (၁) ကြိမ်ရမည်ဖြစ်သည်။
0.35% Sport rebate
) Sportbook ကိုသာ အခြေခံ၍ Shan99.asia တက်ကြွသောအသင်းဝင်အားလုံးအတွက်ဤပရိုမိုးရှင်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။ (အခြားထုတ်ကုန်များ၊ ဂိမ်းများ [နံပါတ်ဂိမ်းများ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ ကင်နို၊ ပါတီကာစီနိုနှင့်ဂိမ်းများ] ကိုဤပရိုမိုးရှင်းအတွက်ချန်လှပ်ထားသည်)
၂။ အရောင်းမြှင့်တင်မှုသည် ၂၀၁၅-၀၈-၁ မှ ၁း၀၀ နာရီအထိ (GMT + 7) မှနောက်ထပ်ကြိုတင်အကြောင်းကြားစာအထိဖြစ်သည်။
၃။ အနည်းဆုံးပေးငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်နှင့်အများဆုံးငွေပေးချေခြင်းအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
(၄) Shan99.asia အသင်းဝင်များ / ကစားသမားအားလုံးသည် Shan99.asia Sportsbook တစ်ခုတည်းတွင်သာလောင်းကြေး၊ စုစုပေါင်းအလောင်းအစားများပေါ်တွင် မူတည်၍ ၀.၃၅% လျှော့စျေးခံစားခွင့်ရှိသည်။ (U-Sports အောက်ရှိဂိမ်းများနှင့် Virtual အားကစားအရေအတွက်ကိုဤပရိုမိုးရှင်းအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ )
"၅) ရလဒ်များနှင့် ကျပ်၃၀၀၀ အလေးသာမှုများ 0.2 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအလောင်းအစားများအားလုံးကိုပြုလုပ်သည့်အလောင်းအစားများအားလုံး၊ ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားများ၊ အလောင်းအစားများကိုငွေလည်ပတ်မှုတွက်ချက်မှုတွင်ထည့်မထားပါ။
အပ်ငွေအပိုဆုမှလည်ပတ်ငွေလိုအပ်ချက်များကို Shan99.asia အားကစားအတွက်ပြန်အမ်းတွက်ချက်မှုအားကစားတွင်စုစုပေါင်းရှယ်ယာပမာဏကိုအဖွဲ့ဝင်များ / ကစားသမားများထံမှလည်းနှုတ်ယူရမည်။ "
၇) ပြန်အမ်းငွေကိုကစားသမား၏ Shan99.asia ၏အဓိကအားကစားစာအုပ်ထဲသို့တနင်္လာနေ့တိုင်းနောက်ဆုံး ၁၂း၀၀ နာရီ (GMT + 7) မှစ၍ အပ်နှံလိမ့်မည်။
၈) ပြန်အမ်းငွေများသည်အခြားဂိမ်းများ (SLOTS GAMES, LIVE CASINO GAMES, 4d) သို့မလွှဲပြောင်းနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် SPORTSBOOKS ဂိမ်းအကောင့်တစ်ခုတည်းသို့သာလျှောက်ထားနိုင်သည်။
၉)ဤပရိုမိုးရှင်းကိုလက်ရှိငွေလက်ကျန်နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လောင်းကြေးအပိုဆုကြေးတောင်းခံမှုအတွက်ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်ချက်များသည်လောင်းကြေးစုစုပေါင်းအလောင်းအစားပမာဏမှနုတ်ယူရမည်။
၁၀) Shan99.asia သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကစားသမားအားလုံးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ် ဦး ချင်းသော်လည်းကောင်းဤပရိုမိုးရှင်းကိုဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၁) Shan99.asia မှကမ်းလှမ်းမှုများအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်း၊ မိသားစု၊ အိမ်ထောင်စုလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့် IP လိပ်စာတစ်ခုလျှင် (၁) ခုသာကန့်သတ်ထားသည်။
၁၂) ငွေထုတ်ရန်အတွက်ငွေသွင်းသူများသည်အနည်းဆုံး( ၁ )ကြိမ်ရမည်ဖြစ်သည်။
50% Refer friend bonus
ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို 2015-08-01 00:00:01 (GMT + 7) မှနောက်ထပ်ကြိုတင်အသိပေးသည်အထိစတင်သည်။
ဤပရိုမိုးရှင်းသည် Shan99.asia အသင်းဝင်များအားလုံးအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
အများဆုံးဆုကြေးငွေမှာကျပ် ၃၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
သင်ရရှိထားသောငွေပမာဏသည် x5 (အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံး) ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
စရံငွေအနေနဲ့သူငယ်ချင်းသည် ကျပ် ၁၀၀၀၀ ထည့်ပါက ကျပ် ၁၀၀၀၀ ငွေပမာဏကိုပထမဆုံးရလိမ့်မည်။
(ငွေမထုတ်ယူမီသင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ပမာဏမှာ x5 ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်)
ကျပ် ၁၀၀၀၀ X ၅ = ၅၀၀၀၀ ကျပ်
သင်၏အနိမ့်ဆုံးနှင့်အများဆုံးထုတ်ယူနိုင်မှုမှာကျပ် ၅၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
Update New July 28, 2020
Update Fun and best Myanmar Online Platform July 28, 2020
Welcome to Shan99.asia Online Casino Are you looking for the betting site with the state of the art online casino mayanmar and cutting-edge slots? This is the best choice for you! We guarantee you an unforgettable experience for every game you play. The casinos here are carefully selected and professionally listed to offer you an easy-to-play platform. At shan99.asia, we deliver myriads of games right to your hands as we guarantee you flawless gaming 24/7
Copyright Shan99.asia 2017